အံ့ဖွယ် Krabi | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း - အပိုင်း 2
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : From Lanta island, takeahired boat to Ko Rok, costing about 1,000 baht each.Boat trip service offer only the high season from November to April.
Ko Lanta ၏ကျက်သရေသည်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင်ရှိပြီးကျွန်းမြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်အစွန်အဖျားအထိကောင်းမွန်သောကမ်းခြေများစွာရှိသည်။. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, ကမ်းခြေအလွန်ကောင်းမွန်သောကျွန်း၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်၎င်းတို့၏အခြေချနေထိုင်မှုများနှင့်ထူးခြားသည့်သဘာဝလမ်းစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်ရှေးဟောင်းအခြေချနေထိုင်သူများနှင့်ပင်လယ်မျိုးနွယ်စုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်တန်းစီထားသည်။. ထိုကဲ့သို့သောပင်လယ်နှင်းရဲ့လှေ floating ပွဲတော်ကဲ့သို့ဒေသခံအစဉ်အလာခရီးသွား by ည့်များကရှာသောအဟောင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့၏ဆွဲဆောင်တက်သည်.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : အားလုံးတစ်နှစ်မှတဆင့်, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးကာလနိုဝင်ဘာလမှAprilပြီလဖြစ်ပါတယ်
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : မနက်ခင်း, 7.00 – 9.00 နာရီ. နေ့လည်ခင်း 17.00 သို့ 19.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : Krabi မှ, အဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၄၂၀၆ ရှိကိုလန်ဆိပ်ခံတံတားအထိလမ်းမကြီးအထိအဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၄ ကိုလိုက်လျှောက်ပါ, Ko Lanta Yai သို့ကူးတို့သွားပါ, အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိကမ်းခြေလမ်းနှင့်အတူ Ko Lanta မြို့ဟောင်းအသိုင်းအဝိုင်းသို့သွားသည်.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : From Khuan O Pier, takealong-tailed boat to the mouth ofSaiCanal. The trip takes about 20 မိနစ်များ.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : Lete November to May
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : မနက်ခင်း. 8.30 သို့ 10.00 နာရီ. afternoon 15.00 သို့ 17.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : From Ao Luk lnter section in front of the District Office, travel5kilometers to Ban Tham Suea, where there are sihns to2boat landings, Bo Thoand Ton Kham, both at2kilometers further. A boat trip of 10-20 minutes takes you to Phi Hua To Cave.